February 22, 2010 by chowutyee ဖြဲသိပ်မုန့် လုပ်စားကြရအောင်
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 38 Comments	38 Responses
မှုံကြီး ကိုယ်သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်ကျွေးလိုက်အုန်း😉
ဟုတ်တယ် မမအိ ၀တ်ရည် အမေဘက်က အဘိုး၊ အဘွားတွေက ဘိတ်(မြိတ်)ကလေ.. ၀တ်ရည်ကတော့ ရန်ကုန်မှာပဲ ကြီးတာ..😉
မမအိတို့က ဘိတ်ကပဲလား.. ၀တ်ရည် အဖိုးက ဒါရိုက်တာ ဘိတ်ကလာတဲ့ ငံပြာရည်လေ.. မမအိ အဖေနဲ့ အမေတော့ သိမယ်ထင်တယ်…း) ၀တ်ရည်လည်း တူတူပဲ မမအိ၊ ခုထိ တခါမှ ဘိတ်သွားမလည် ဖူးသေးဘူး.. ဟဲဟဲ .. အမေတို့ကတော့ အမျိုးရှိလို့ သွားလည်ပါတယ်၊ အမျိုးတွေကလည်း ဘိတ်မှာ သိပ်မရှိကြတော့တာနဲ့၊ ရန်ကုန်မှာ ပိုများလို့ မသွားဖြစ်တော့တာ။😉
ဟုတ်တယ် တော်တော်များများ မစားဖူးဘူး နေခြည်… လုပ်စားကြည့်ပါလား လုပ်ရလွယ်၊ စားလို့လည်းကောင်းတယ်…🙂
Name က မိုက်တယ် ဖြဲသိပ်မုန့် …😀
AyeAyeNwe, ရိုးရိုးရေနဲ့ပဲ လုပ်ရတာ…🙂
၀တ်ရည်ကတော့ သွားရည်ကျအောင် လုပ်ပြီ၊ My favourite snack. I gonna to ask cwh to do it😛. တရုတ်တန်းမှာ အဲဒါကို မွှာကျီးလို့ ခေါ်တယ်၊ လမ်းမတော်ထိပ်မှာ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် ရောင်းတတ်တယ်၊ ဟိုတစ်ခါပြန်လာတုန်းကတောင် ရှိသေးတယ်၊ သူက မနက်ပဲလား၊ ညနေပဲလား မသိဘူးရောင်းတာ၊ ခြင်းတောင်းလေးနဲ့
တခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး။ ဒါမေ့မယ့် ၀တ်ရည် လုပ်ဖြစ်တဲ့ ချက်နည်းလေး တင်ပေးပါ့မယ်နော်..🙂